Feno ny Fanahy
"Ary dia feno fifaliana sy ny Fanahy Masina ny mpianatra" —Asa. 13:52.
Lehibe tsy hay refesina ny asan'ny Fanahy Masina. Avy amin'io Loharano io no hahatongavan'ny hery sy fahombiazana eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra; ny Fanahy Masina dia Mpananatra, tahaka ny fanatrehan'i Kristy ny fanahy manokana. Izay mitady an'i Kristy amin'ny finoana tsotra sy toy ny an'ny zaza dia lasa mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra noho ny asan'ny Fanahy Masina. Rehefa tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra ny Kristianina, dia hahafantatra fa ho tanteraka ao Aminy izay lohan'ny zavatra rehetra izy. Tahaka ny nanomezam-boninahitra an'i Kristy tamin'ny andro Pantekosta, no hanomezam-boninahitra Azy indray amin'ny fiafaran'ny asan'ny filazantsara, ary hanomana ny olona hahafahatra amin'ny fizahan-toetra farany mandritra ny fiafaran'ny fifanandrinan'ny hery mifanandrina lehibe Izy.
Rehefa hohazavain'ny voninahitr' Andriamanitra ny tany, dia hahita asa sahala amin'izay notanterahin'ny mpianatra fony izy ireo feno ny Fanahy Masina ka nitory ny herin' ilay Mpamonjy nitsangan-ko velona. Namakivaky ny saina maizin'ireo nofitahin'ny fahavalon ' i Kristy ny fahazavan'ny lanitra, ary nafoy ny hevi-diso momba Azy; satria noho ny asan'ny Fanahy Masina dia mahita Azy nasandratra ho Andriana sy Mpamonjy izy ireo ankehitriny, manome fibebahana an'ny Isiraely sy famelana ny helony. Nomem-boninahitra avy tamin'ny herin'ny Fanahy Masina mitoetra eo amin'ny olona i Kristy.
Mitondra fahatsapana ny heriny sy ny fahefany ny fanambarana an'i Kristy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ary manatsotra ny tanana Aminy amin'ny finoana izy ireo, manao hoe: "Mino aho". Toy izany tamin'ny fotoan'ny ranonorana aloha; fa mbola mivatravatra kokoa ny fara orana. Homem-boninahitra ny Mpamonjin'ny olombelona, ary hohazavain'ny tara-pahazavana mamiratry ny fahamarinany ny tany. Loharanon'ny fahazavana Izy, ary ny fahazavana avy amin'ny vavahady mitanila dia hazava amin'ny vahoakan'Andriamanitra, mba hanandratany Azy avo noho ny toetrany be voninahitra eo anatrehan'ireo mitoetra ao anatin'ny haizina. - HoM, 1 Novambra 1893.